भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आज जन्मदिन : ७ हजार केजीको केक, अरु के–के हुँदैछ ? — SuchanaKendra.Com
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आज जन्मदिन : ७ हजार केजीको केक, अरु के–के हुँदैछ ?
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रका रुपमा चिनिएको भारतमा लगातार दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल नरेन्द्र मोदीको आज ६९औं जन्मदिन धुमधामका साथ मनाइदैछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज देखि ६९ वर्षका भए । यस अवसरमा उनी केवडियाको सरदार सरोवर बाँधमा माता नर्मदाको पूजा गर्नेछन् ।
मोदी नमामि देवी नर्मदे महोत्सवमा पनि भाग लिने छन् । यस पछि स्ट्याच्यू अफ लिबर्टीमा गएर सरदार वल्लभभाई पटेललाई श्रद्धांजलि दिने जनाइएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार उहाँ दिउँसो अहमदाबादमा पनि आमा हीराबेनको आशीर्वाद लिन जानेछन् । मोदी यहाँ दत्त मन्दिर र पोषण पार्कको पनि भ्रमण गर्ने छन् । यस पछि एक सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ ।
यी सबै कार्यक्रम पछि, मोदी गांधीनगर जानेछन् । सरदार सरोवर बाँधमा नर्मदा नदीको पानी सतह १३८.६८ मिटरमा पुगेको छ । सरदार सरोवर मोदीको सपनाका परियोजना हुन् । बाँधको जग पहिलो प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरूले १९६१ मा हालेका थिए, तर २०१७ मा ५६ बर्ष पछि सम्पन्न भयो । पछिल्लो वर्ष, कम वर्षाका कारण बाँध आधा खाली थियो ।
अर्को तर्फ, सुरतको बेकरीले ७०० फिट अग्लो केक बनाउँदैछ । जानकारी अनुसार ७,००० केजीको केक मोदिको जन्मदिनको लागि तयार पारिएको छ । यसलाई ‘केक अगेन्स्ट करप्शन’ अर्थात भ्रष्टाचार विरोधी केक नाम दिइएको छ ।